फाइनलका लागि कतार गएका टप १२ प्रतिस्पर्धीहरु कतारमा पुगेपछि के गर्दै छन् ? हेर्नुस (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
फाइनलका लागि कतार गएका टप १२ प्रतिस्पर्धीहरु कतारमा पुगेपछि के गर्दै छन् ? हेर्नुस (भिडियो सहित )
September 19, 2017	229 Views
नेपाल आइडलका टप १२ प्रतिस्पर्धीहरु फाइनलका लागि आज बिहान कारीब ९ बजे कतार प्रस्थान गरे ।आईडलका १२ प्रतिस्पर्धीहरु निशान भट्टराई, बुद्ध लामा, प्रताप दास, सागर आले, सुजता पाण्डे, सुरज थापा, विल्सन श्रेष्ठ, मेनुका पौडेल, केन्जल मेयर श्रेष्ठ, प्रमिला राइ, सन्ध्या जोशी, राहुल विश्वाश आज निकै उत्साहित देखिएका थिए ।
टप तीन प्रतिस्पर्धी मध्ये को नेपाल आईडल बन्ने भनेर सबै जनताको मन मा ठुलो कौतुहलता छ भने प्रतिस्पर्धीहरुको मनमा उत्शाह र डर दुबै देखिन्थ्यो । टप १२ प्रतिस्प्रधीहरु बाटोमा सबै जना रमाइलो गर्दै कतार पुगेका छन् । तल भिडियोमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।